Sawirro: Madaxda maamul goboleedyada dalka oo soo gaaray magaalada Baydhaba
arlaadi May 13, 2018 No Comments
Waxaa maanta magaalada Baydhaba ee xarunta KMG maamulka Koonfur galbeed soo gaaray inta badan madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay weheliyaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, gudoomiyaha degmada Baydhaba, saraakiil ciidan iyo ururada bulshada rayidka magaalada Baydhaba ayaa garoonka Dr Shaatigaduud kusoo dhoweeyay madaxda maamulada kala ah Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan (Madoobe), Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Waxaanan weli soo gaarin magaalada Baydhaba madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas)
Maamulka Somaliland ayaan isaga ka qaybgelin shirarka ay qabsadaan madaxda maamulada dalka intiisa kale ayada oo ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale waxa ayna leeyihiin lacag, baasaboor, calan iyo ciidamo u gaar ah.
Madaxda kusoo ururaysa Baydhaba ayaa lagu wadaa inay halkaas ku qabsadaan shirka Golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ayada oo aan la ogeyn inay dowlada federaalka Soomaaliya wefdi usoo dirsan doonto shirkaas iyo in kale balse dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumeysan inay maamul goboleedyadu caqabad ku yihiin qaranimada iyo dowladnimada Soomaaliya maadaama ay iskood heshiisyo usoo galaan inta badana ka hor yimaadaan go’aanada kasoo baxa dowlada dhexe ee dalka.
Sawir qaade: Wariye sare Maxamed Cabdicasiis Salaad
Baidoa Media Center